Iindaba zoncwadi ezikusa kwelinye ixesha | IBezzia
UMaria vazquez | 14/10/2021 12:00 | Iindaba
Kule nyanga sihamba kwezi ncwadi zine zintsha ukuya kwelinye ixesha. Sikwenza oko Ababhali benkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX njengoLouisa May Alcott, u-Anne Brontë okanye uFlora Thompson, kunye no-Anne Hébert kunye nabasetyhini ababalulekileyo. Ukulungele ukonwabela amabali akho?
1 Isitshixo esingaqondakaliyo kunye nokuvula kwaso
2 Agnes Ngwevu
Isitshixo esingaqondakaliyo kunye nokuvula kwaso
Umbhali: uLouisa May Alcott
Guqulelwa ngu: Micaela Vázquez Lachaga
Uthando lubonakala lulawula Indlu yezidwangube uRichard noAlice Trevlyn, emi kwiindawo ezisemaphandleni zesiNgesi; Nangona kunjalo, undwendwelo lwangaphambi komntu wasemzini kunye namagama ambalwa atshintshisanayo phakathi kwakhe nomyeni wakhe, awaliva ngokufihlakeleyo u-Alice, sisiqalo sentlekele engachazekiyo eya kuguqula ngonaphakade inzolo yosapho lwaseTrevlyn. Zeziphi iindaba ezimbi eze nalo ndwendwe? Kutheni le nto uAlice ewela kwimeko yobuthathaka ngokwasemzimbeni nasengqondweni engakwaziyo nokuthomalalisa ubukho bosana lwakhe uLillian? Ukubonakala, kweminyaka embalwa kamva, kukaPaul, umfana oza kungena kwinkonzo ka-Lady Trevlyn kunye nentombi yakhe ekwishumi elivisayo, kuya kuba nakho konke oku? Kwaye yintoni eya kuvula isitshixo esimangalisayo esinika isihloko kule noveli imfutshane imnandi?
Igcwele ukurhanela kwiphepha lokugqibela, Isitshixo esingaqondakaliyo nento esiyivulileyo yile, njengoko kuchaziwe kwintshayelelo kaMicaela Vázquez Lachaga, umguquleli walo msebenzi, “indibaniselwano yezithako ezingathandabuzekiyo ezinokutsalela nawuphi na umfundi onandipha inkulungwane yeshumi elinesithoba yemfihlakalo namabali othando, ngokunjalo Nabani na owuxabisayo umsebenzi woncwadi kaLouisa May Alcott kwaye ufuna ukumazi kakuhle nangakumbi. ”
Umbhali: Anne Brontë
Guqulelwa ngu: Menchu ​​Gutiérrez
Bekuya kuba mnandi kakhulu ukuba ngumhambi! Phuma uye ehlabathini ... ndizuze indlela yam yokuphila ... Fundisa abatsha ukuba baqole! " Eli liphupha lika intombi yomfundisi othobekileyo, umbono wokuzimela kwezoqoqosho kunye nokuzimela, kunye nokuzinikezela kwimisebenzi emihle efana nemfundo. Nje ukuba kuzalisekiswe, nangona kunjalo, abalinganiswa kweli phupha baziveza ngakumbi njengezilo ezoyikisayo: abantwana abakhohlakeleyo, abakhohlisayo nabarhabaxa amantombazana amancinci, ootata aboyikekayo, oomama abakhohlakeleyo nabazithandayo ... naphakathi kwayo yonke le nto umphuphi oselula, aphathwe kancinci ngaphezu njengentombazana.
U-Agnes Grey (1847), inoveli yokuqala ka-Anne Brontë, sisityhilelo esingavaliyo esisekwe kumava obomi bomntu ubume obunobungozi, izinto eziphathekayo kunye nokuziphatha, kokuziphatha kuka-Victorian; kwaye ke kwangaxeshanye libali elisenyongweni, phantse elifihlakeleyo lothando kunye nokuthotywa, apho "oyena mntu uziphethe kakubi" kunye "nabona bantu bazizisulu ezisemngciphekweni omkhulu" baxhasa idabi elingummangaliso phantsi kwento iqhawe eliyichaza njengombala "omnyama umhlaba osezantsi, owam umhlaba ”.
Umbhali: UFlora Thompson
Guqulelwa ngu: Pablo González-Nuevo
Umshicileli: Iphepha leTin
“Ngenjikalanga efudumeleyo kaSeptemba ngasekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesithoba, intombazana yayiwela umda waseHampshire isiya eHeatherley. Wayenxibe ilokhwe emdaka ngombala kunye nentloko yebeaver eyayigqunywe ziintsiba zenciniba ezimbini ezincinci. Ezintsha kwimpahla yelizwe. »
Le ntombazana nguFlora Thompson, uLaura kwiintsomi, kunye nedolophu aya kuyo, eGrayshott, apho uFlora ahlala khona ngo-1898 njengomphathi weposi. UHertford owonileyo, abaqeshi bakhe, bamlindele apho; abaxhasi ababalaseleyo njengo-Arthur Conan Doyle okanye uGeorges Bernard Shaw, abasebenzisi abaqhelekileyo bocingo lwengingqi; okanye ivenkile ethengisa ngempahla kaMadame Lillywhite ("oomatshini bokulungisa, ukuthunga, kunye nokubolekisa ngeencwadi"), apho uLaura ngamanye amaxesha anokukwazi ukufumana ufundo olutsha.
Ngexesha lebhayisekile ethobekileyo, iifoto zokuqala zeKodak kunye neeshliti ezilinganayo, uHeatherley sisiqendu esitsha kubomi bokuzimela nokuzimela kukaLaura, impuku yelizwe elincinci - njengoko abahlobo bakhe banamhlanje bembiza ngokuba yi-fin de siècle - indawo yazo yendalo yayihlala ingamahlathi kunye nendalo yasendle esadibana nayo okokuqala ngqa ngokumangalisayo ICandleford Trilogy.
Umbhali: Anne Hébert
Guqulelwa ngu: Luisa Lucuix Venegas
ILos alcatrace iguqulela Ihlabathi elikhohlakeleyo nelingathandabuzekiyo kwindawo encinci ethetha isiNgesi, watyunyuzwa liliza lamaKatolika elithetha isiFrentshi. I-Femina Prize 1982, le noveli kukudibana kwakhona nentlekele ebulalayo ephawulwe lulwaphulo-mthetho kunye nebarbarism. Isimemo kwindalo entsonkothileyo kunye nemibongo kaHébert.
Ngo-Agasti 31, 1936, abakwishumi elivisayo ababini, UOlivia noNora Atkins, bayanyamalala eGriffin Creek, idolophu yaseKhanada apho kubonakala ubumnyama buhlala buhleli. Umona ngobuhle babo, umzila wabo ulahlekile elunxwemeni lwasendle. Imifanekiso yamantombazana ixubana nembonakalo yelwandle, kwaye umoya uhlwayela imozulu engathandekiyo, efanelekileyo kwi-elucubration, ekuthi kuyo umkhondo wesithintelo esingavumelekanga kunye nesingqi esibi. Kungekudala kugwetywe ukuba ukungabikho kwakhe sisiphumo sethuba: ilishwa lihleli phezu kwexesha elide. Ngamazwi abalinganiswa, kunye nezinye iileta, sibona inkqubo engathintelekiyo apho le ntlekele iphazamise uluntu ngokubanzi, iqanduselwe kwisithethe nakwinkolo yonqulo. Kwaye ikamva ledolophu encinci yaseQuebec ibonakala ngathi ixhomekeke ekuyileni kukaThixo.
Zeziphi kwezi zinto zintsha zifuna ukufundwa? Ngaba kwenzeka kuwe njengam ukuba ubathande bonke? Khumbula ukuba inyanga nenyanga eBezzia sabelana nawe ngeendaba zoncwadi kwaye kulenyanga iphelileyo besizinikele kuyo imisebenzi ejongene nesizungu. Ukuba unomdla kwisihloko, bajonge!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iindaba zoncwadi ezikusa kwelinye ixesha
Indlela yokuhombisa ngee vases